तपाईको आज मंगलवारको राशिफल भन्छ-आज यी पाँच राशिकाले पुर्याउनुपर्नेछ विशेष ध्यान ! « Sansar News
तपाईको आज मंगलवारको राशिफल भन्छ-आज यी पाँच राशिकाले पुर्याउनुपर्नेछ विशेष ध्यान !
१४ मंसिर २०७८, मंगलवार ०८:१३
आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। पहिले गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुनेछ। चल–अचल धनको उपयोगबाट मनग्य फाइदा उठाउन सकिनेछ। मिहिनेत गर्दा दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ।
२०७८ मंसिर १४ गते, मंगलवार, ३० नोभेम्बर २०२१